स‌ंसदमा छिर्ने वामदेवकाे चाहना फेरि अधुरै : अालाेचित भएपछि अाफ्नै निर्णयबाट पछि हटे ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
स‌ंसदमा छिर्ने वामदेवकाे चाहना फेरि अधुरै : अालाेचित भएपछि अाफ्नै निर्णयबाट पछि हटे !
काठमाडाैँ । संसदकाे तल्लाे सदन प्रतिनिधि सभामा छिर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमकाे चाहना फेरि अधुरै रहने भएकाे छ । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर- ७ का निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरलार्इ राजीनामा दिन लगार्इ चुनाव लड्ने दाउ खाेज्नुभएकाे गाैतम अन्तत: अाफ्नै निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुनुभएको छ ।